ထားပါတော့လေဆိုလို.မရဘူး (၁) အဆက်
လူနဲ့ပါတ်ဝန်းကျင်တိုရဲ.သဘောထားမှာ လူက ပါတ်ဝန်းကျင်ကို ပြုပြင်တာကို မအောင်မြင်ရင် လူဟာ ပါတ်ဝန်းကျင်ရဲူ ပြုပြင်မှုကို ခံရတတ်ပါတယ် ။ ဒီမိုကရေစီဟာ အကောင်းကိုလဲ ဖြစ်စေနိုင်တယ် အဆိုးကိုလဲ ဖြစ်စေ နိုင်တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အတိတ်က မြန်မာ ခေါင်းဆောင် ဘယ်ခေါင်းဆောင်မှ မြန်မာနိင်ငံကို ပျက်ဆီးစေတော့ ဆိုတဲ့စိတ် ၊ မစားရတဲ့ အမဲ သဲနဲပက် စိတ်နဲ.မလုပ်ခဲ့ဘူး ။ ဒါမေဲ့ ပစ္စုပန်ရဲ့ အတောအတွင်းမှာ အံ့သြစရာတွေ.ရတယ် ။ ဒါက ကျုပ်ရဲ.ရှုဒေါင့်က လို.ဘဲ ပြောခြင်ရင် ပြောပါတော၊့ ရပါတယ်။ ၁၉၈၈ ခုက တိုင်းပြည် ပျက်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့တာ မပျက်ခဲဘူး. ၊သဲနဲ.ပက်တာဘယ်သူလဲ သက်ဆိုင်သူတွေ သိကြပါတယ် အထိမ်းတော်လို.ပေါ. ဗျာ။
ရှဉ့်လဲ လျှောက်သာ ပြာလဲ ဆွဲသာ ။ ရေ လိုက် ငါးလိုက် ဘဲ ပြောပြော။ မီးစင် ကြည့်ကတယ်ဘဲ ဆိုဆို အမြင်အရကတော့ နောက်ဆုံး မယ်ဒွေး မြွေမျိုခံရတာ
မျိုးဖြစ်ဘို. အခြေ စိုက်နေတယ် ။ ဒီ အခြေအနေက သူဘယ်လို လွတ်ကင်း
အောင်လုပ်မလဲ? မြန်မာလွတ်လပ်ရေး ဆွေးနွေးကြတုန်းက မြန်မာနိုင်ငံကို အတုအယောင် လွတ်လပ်ရေးနဲ လက်အောက်ခံ နို်င်ငံ တခုအဖြစ်ဖန်တည်းဘို. အင်္ဂလိပ်ရော၊ ဂျပန်ရော ကြိုးပန်းခဲ့ကြဘူးတယ်ဆို တာမမေ့ ကောင်းပါဘူး ၊ ဗြိတိသျှ ဓနသဟာယနိုင်ငံများ အဖွဲ.ဆိုတာ နာမယ်သာကျန်တော့တာမို.မြန်မာနိုင်ငံကို ဗြိတိသျှ ဒိုမီနီယံ နိုင်ငံ တခုမဟုတ် သည့်တိုင်အမေရိကန်ရဲ.အကာအကွယ် ခံ နိုင်ငံတခု ဖြစ်မလာဘူးလိုလဲ ဘယ်သူမှ မပြောနိုင်ဘူး ။ ဒါဆိုရင် ရှေ.ဆက်ဘာတွေ ပါလာမယ်ဆိုတာ ကိုရင်ကြီးသတိထားမိပါလိမ့်
မယ်။ အခုချိန်မှာ တရုတ်-ကန် ဆက်ဆံရေး ၊ ရုရှား-ကန် ဆက်ဆံရေးတွေဟာ လိပ်ခဲတင်းတင်းတွေဖြစ်လာနေပြန်ပြီ. စစ်အေးကာလ ကိုတစတစပြန်သွား၊
‘ဘက်မလိုက် ကြားနေနိုင်ငံများအဖွဲ.ဆိုတာ ဘယ်မှာလဲ ၊ ဒါလဲ မှန်တာ
ပြောရရင် နာမယ်သာရှိပါတော.တယ် ၊ အရေးကြီးတာက ကျုပ်တို. မြန်မာနိုင်ငံ ဘယ်မှာလဲ ။ဆိုလိုတာက ကိုယ်ရဲ့ပျော့ကွက် သူများသိရင် ကိုယ်ခံရမယ် ဆိုတာ စိတ်ချ ၊ ဒီပော့ကွက်ဟာလဲ လူတိုင်းမှာရှိတယ်၊ Archille Heel လို. အနောက် ဖက်မှာ ခေါ်စမှတ်ရှိတယ် ။ မြန်မာ့ရာဇ၀င်တွေမှာ သူရဲကောင်းတွေ စီချင်း
ထိုးကြတော သံချပ် လွတ်တဲ့.နေရာလို.ပြောကြတယ်လေ ။
ခေါင်းဆောင်မှန်ရင် လုပ်တတ်ရမယ် လုပ်ရဲ ရမယ်။ တချိန်က ‘သတ်ရဲ မင်းဖြစ်’ ဆိုတဲ့ စကားဟာ မြန်မာတွေကြားမှ အရုပ်ဆိုး၊ အနံဆိုးနေကေါင်း နေပါလိမ့်မယ် ၊ ဒီစံနစ်ဟာ ယဉ်ကျေးမှု မရှိတဲ့ ၊ မထွန်းကားတဲ့ နိုင်ငံတွေက ပညာမဲ့တွေ ရဲ. အကျင့်တွေ စံနစ်တွေလို.ပြောမလား? မြန်မာတွေ မန္တလေး တောင်ပေါ်ကိုဖြစ်စေ ၊ တန်.ကြည့်တောင် ပေါ်ကိုဖြစ်စေ တက်ပြီး ၊ ကမ္ဘာ လောကဓါတ်ကြီးကို လေ့လာ သုံးသတ်လိုက်ရင် ‘ ရက်စက်မှ ကျေကွဲ- သတ်ရဲမှမင်းဖြစ်’ ဆိုတဲ့ စကားဟာ ၊ ရာခိုင်နှုန်းပြည့် မှန်ကန်တုန်းဘဲ ဆိုတာ မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ. ရမယ် ။
ပြောရရင် စော်ကားရာရောက်လိမ်မယ် ကိုရင်ကြီး ၊ ဘယ်သူ.ကိုမှတော့ မရည်ရွယ်လိုပါဘူး ။ မြန်မာတချို.ကို အကြံကောင်းပေးလိုတာက တတ်ရင် လုပ်ကြပါ ၊ ငတ်လိုတော့ဖြင့် တက်မလုပ်ကြပါနဲ့လို. ။ ပြောရတာတော့ ခက်တာမှ သိမ်ခက် တယ် ၊ ရွေးသူရော အရွေးခံတွေရောအရေးကြီးပါတယ်။
တိုင်းပြည်နဲ. လူမျိုးကတော့ ကိုရင်ကြီးတို ကျုပ်တို သက်တန်းမှာ ရုတ်တရက် ပျောက်မသွားသေးပါဘူး ၊ ဘယ်လိုတိုင်းပြည်လဲ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေ လဲ ဆိုတာကိုလဲ ၊ လေကုန်ခံပြီး မေးမနေပါနဲ့တော့ ၊ ၂၁ ရာစုမှာ ဗမာပြည် ဆိုတာ
လဲ မရှိ ၊ ဗမာ ဆိုတဲ့ လူမျိုးကြီး တမျိုးဟာလဲ ပျောက်ချင်းမလှ ပျောက်နေတာ
ကို ကိုရင်ကြီး ခရီးသွားဟန်လွဲ သတိထားမိတယ် မဟုတ်လား ။ ကြာရင် ဗုဒ္ဒဘာသာ ဆိုတာတောင် ကျုပ်တို.နိုင်ငံမှာ ပျောက်သွား အုံးမယ် ။
ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေ နိုးကြားလာကြတာ နိုးကြားချိန်ရောက်လာလို.ဘဲ လို.ဆိုရမယ် ၊ ပြောရရင် ဗမာပြည်ကို အင်္ဂလိပ်ဝင်ကထဲက ဗမာတွေ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေကို နည်းအမျိုးမျိုး ဖိနှိပ်ခဲ့တာ ၊ ဘာသာရေးလွတ်လပ်မှု ဆိုပြီး ခရစ်ယန်
မစ်ရှင်ကျေင်းတွေ ၊ ခရစ်ယန် ဘုရားရှိကျောင်း ဆိုတာတွေ မွတ်စလင် ဗလီတွေ
နင်းဆောက် ကျုပ်တို. ဗမာပြည်မှာ ခရစ်ယန် ဒါမှမဟုတ် မွတ်စလင်မှ မဟုတ်
ရင် လူမဟုတ်တော့ သယောင်ဘ၊ဲ စာသင်တာတောင် အင်္ဂလိပ်စာ.ဟိန္ဒူ စာ မသင်မနေရ တဲ့ .ကျုပ်တို. ဗမာတွေ ခေါင်းတောင် မထူနိုင်ဘဲ ရှိခဲ့ရတယ် ဆိုတဲ့ မှတ်တမ်းတွေ ရှိတယ် ဗမာပြည်မှာ ဗမာတွေ ခွဲခြားနှိမ့်ချ ဆက်ဆံ ခံရတယ်
“ အပါတိုက်” စံနစ်တခု ထွန်းကားခဲ့ဘူးပါတယ် ဆိုတာ မှတ်တမ်းတွေရှိ
တယ် ။ ဗမြာ့ပည်မှာ အဖိနှိပ်ခံနေရသူတွေဟာ ဗမာတွေ ပါ ကိုရင်ကြီးရဲ. သေသေချာချာ စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါ၊ ထားပါတော့လေ ဆိုလို.မရဘူး။ ရာဇ၀င်
ဗုဓ္ဒဂါယာ တခေါက် ရောက်သွားတဲ့ည အခါ ၊ ဂေါတမ ဗုဓ္ဒဟာ ဟိန္ဒူက ခွဲထွက်ခဲ.တာမို. ဟိန္ဒူ တွေ ဘရာမင်တွေက ဗုဓ္ဒနဲ့ ဗုဓ္ဒဘာသာကို ကျင်ကြ တာ။ ပရိနှိဗ္ပာန်ပြူ ပြီး တာတောင် အာသောက( ဘီစီ ၃၀၄-၂၃၂) လက်ထက်က လှူခဲ့တဲ့ ရုပ်ပွားတော်တွေကို တောင် ဖျက်ဆီးခဲ့တာ ၊အိန္ဒိယ ကို မွတ်စလင်တွေ ၀င်တော့မှ သူတိုလက်ချက်နဲ. ကျန်တဲ့ရုပ်ပွားတော် တွေ ဗုဓ္ဒနဲ.ပါတ်သက်တာ
တွေ အစတုန်းကုန်တာတွေ သိခဲ့ရတယ် ၊ အာဖဂန်မှာ သမိုင်းဝင် ရုပ်ပွားတော်
်ကြီးတွေ ကို တာလီဗန်မွတ်စလင်တွေက Target Practice လုပ်တာ။ ကိုရင် ကြီးတို.ကျူပ်တို.မျက်မှောက် ကာလတင် ဘဲ မဟုတ်လား ။
လက်တွေ.မှာ မေတ္တာသုတ် စွတ် ရွတ်ပြီး ကြိူလိုမရဘူး ကိုရင်ကြီးရဲ.။ တွေအုံးမယ်လေ ။